Homeलेखरङ्गभेद र जातिभेद बीचको ऊ।
समय सायद अघिल्लो वैशाख ताकाको होला। चर्को घामको तापमानले माटो बाफिएको थियो अनि विद्यालयका भित्ताका इट्टाहरु पाक्दै थिए। १२ वटा पंखा चलेपनि तातोको महसुस गरी राखेको थियो शरीरले।
स्कूल भरी हल्ला थियो। यस सेमेस्टर को परीक्षा कहिले गराउने दसैंतिहार अघि या दशैतिहार पछि छठ अघि। विद्यालयका एक शिक्षक सबै कक्षामा गएर विद्यार्थीको राय लिँदै थिए। पालो आयो उसको कक्षाको। अन्तिम बाट दोश्रो बेन्च मा बसिरहेको थियो एक कालो केटा। उसले आफूलाई गहुँगोरो वर्ण को ठान्थ्यो तर सबैको माझमा ऊ कालो ठहरिन्थ्यो किनकि बाकी सबै गोरा थिए। २-४ मिनतमा आफ्ना कुरा सिद्धाएर कालो केटालाई इंगित गर्दै शिक्षकले भने तिम्लाई कस्तो लाग्छ कहिले गर्दा ठीक हुन्छ परीक्षा छठ ले केही त गर्दैन नि? कालो केटाले हास्दै जवाफ दियो पूरा विश्वविद्यालय ले गर्ने निर्णयमा हाम्रो विद्यालयले यसो गरे हुन्छ भन्दैमा हुँदैन सर, तैपनि म त पछि होस भन्ने चाहन्छु। तर म पहिला भए हुन्थ्यो पछिल्लो सेमेस्टर मा प्रेसर हुन्न तिमीहरूलाई, तिम्रो तराईको साथीको राय सुनियो भन्ने जवाफ आयो सरको। कालो केटा मुस्कुराउँदै भन्यो सर म पहाडीया हो।
गलल हासो गुञ्जायमान भयो कक्षाकोठा भरि।
रङ्ग का पहाड, हिमाल, तराईको बासिन्दा भनेर छुट्याउन खोज्ने, रङ्ग भेद सृजना गर्न खोज्ने, विश्व विद्यालयका नामुद शिक्षक जो देश विदेश घुमेर शिक्षा लिन्छन् - दिन्छन् उनमा नै ज्ञान छैन भने तपाईं हामी जस्तो कुवाको भ्यागुतामा रंगभेदको के ज्ञान हुन्थ्यो र?
समयले कोल्टो फेर्दै थियो। रंगभेदका कुरा बाकी थिए त त्यस कालो केटाका मन अनि मस्तिष्कमा। ऐनामा हरेक पटक अनुहार हेर्दा होस् या सेल्फी खिच्दा होस् उसको मनमा घचघचाउ थ्यो त्यही कुराले।अनि प्रश्न गर्दथ्यो आखिर किन मलाई कालो जन्मायौ आमा भनेर।
कालो केटालाई गोरी केटीको अनुहार मन पर्यो, बानी बेहोरा मन पर्यो वा मन मन पर्यो तर उसलाई प्यार भएछ। कक्षाकी एउटी जनजाति वर्गकि केटीलाई देखेर उसको अर्थात् कालो केटाको मनमा मायाको टुसा पलाउँछ। आफ्नो फुर्सदको समयमा केटाले केटीलाई मेसेज गर्छ बिस्तारै नजिकिन्छन् उनीहरू । दुवै जना खुसी - दुःख साटासाट गर्छन् । जब परिवारको कुरा आउँथ्यो उनीहरू दुवैजना पछि हटथे। केटाले आफ्नो परिवार लाई सम्हाल्ने आश्वासन दिन्थ्यो तर केटीको पारिवारिक स्थितिलाई बुझेर एउटा बलियो रसिरुपी सम्बन्धलाई चुडालिन्छ दुवै जनाको सम्झौतामा।
रङ्गभेदले पिल्सेको मनमा फेरी जातिभेदले बज्र हान्यो।
अहिले उसले हरेक पटक ऐना हेर्छ नि आफूलाई जॉर्ज फ्लोयड र नवराज वि.क. देख्छ। रंगभेद र जातिभेदमा मृत्युवरण गरेका यी दुईलाई आफ्नो मनमा राखेको त्यस कालो केटाको प्रश्न छ आखिर किन मेरो अघि रङ्गभेद आउँछ कहिले, त कहिले जातिभेद?
एउटै कक्षा कोठा भित्र रङ्गभेद र जातिभेद छ। सिङ्गो देशमा विद्यमान रहेको भेदभाव हटाउन पक्कै समय लाग्नेछ तर आशा छ परिवर्तन छिटै हुनेछ।
उसको मन भित्र जीवित फ्लोयड र नवराज कहिले सम्म रहलान् ?
Nepali Articles नेपाली लेख लेख